The Mindy Project Season 5: Chris Messina သည်ပုံမှန်စီးရီးများမဟုတ်တော့ပါ - ဟူးလူ
The Mindy Project Season 5: Chris Messina သည်ပုံမှန်စီးရီးများမဟုတ်တော့ပါ
အဆိုပါအမည်ပျက်စာရင်းရာသီ4Netflix လွှတ်ပေးရန်နေ့စွဲ
ပုံ - Isabella Vosmikova / FOX
Netflix က Stranger Things နောက်တွဲယာဉ်ကိုထုတ်လုပ်ခဲ့သည် (ဗီဒီယို) လိမ္မော်ရောင်သည်အနက်ရောင်ရာသီသစ် (၃) ခုပြန်လည်စုစည်းခြင်း (ဗီဒီယို)
Chris Messina သည် The Mindy Project Season5သို့ပြန်လာသည်။ သို့သော်သူသည်စီးရီးပုံမှန်မဟုတ်တော့ပါ။
ကနေအစီရင်ခံစာအရ တီဗီလိုင်း The Mindy Project တွင် Danny Castellano အဖြစ်ပါဝင်သရုပ်ဆောင်သည့် Chris Messina သည် The Mindy Project Season5သို့ပြန်လာမည်ဖြစ်သော်လည်းပုံမှန်စီးရီးအဖြစ်မဟုတ်ပါ။
အချို့သောမီဒီယာဌာနများက၎င်းကိုပြောင်းရွှေ့ရန်မက်ဆီနာအတွက်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်အဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့ကြသော်လည်းမင်းတုန်းမင်းက၎င်းနှင့်အခြားကောလာဟလများကိုအင်တာဗျူးတစ်ခုတွင်ရှင်းလင်းခဲ့သည် IS! ။ အခြေခံအားဖြင့် Kaling ပြောတာကဒီပြောင်းရွှေ့မှုဟာ Mindy နဲ့ Danny တို့အကြားဇာတ်လမ်းရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအနေနဲ့လုပ်ခဲ့တာပါ။
ဒီမှာ Kaling က E ကိုပြောခဲ့တဲ့စကားရဲ့အောက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ Messina ကိုပုံမှန်စီးရီးအဖြစ်ပြန်ယူရန်မဆုံးဖြတ်ခြင်း၊ E မှတဆင့်!:
အရာအားလုံး၏ရာသီ2ယူတာပဲ
လူတွေကဒီအကြောင်းကိုကြားတဲ့အခါငါသူတို့ကသူ့ကိုမတွေ့တော့မှာကိုသူတို့တခါတလေစိုးရိမ်မိတယ်လို့ထင်တယ်၊ ဒါပေမဲ့သူကဒီဖြစ်ရပ် ၁၃ ခုမှာမကြာခဏဖြစ်ခဲ့ဖူးတယ်၊ သူတို့ကကလေးတစ်ယောက်ရှိတယ်။ အထူးသဖြင့်မင်ဒီရဲ့ကလေးရဲ့ဖခင်အဖြစ်ဒီဇာတ်ကောင်ကိုပြဇာတ်ထဲကိုထည့်သွင်းထားလို့ပြသတာမဟုတ်ဘူး။
တီဗီလိုင်းအရမက်ဆီနာသည်ထပ်တလဲလဲ guest ည့်သည်ကြယ်အဖြစ်အသိအမှတ်ပြုခံရလိမ့်မည်။ ကလေး၏ဖခင်အဖြစ်, သင်တန်းသူလုံးဝပြပွဲထဲကစာဖြင့်ရေးသားခံရဖို့မသွားခဲ့သည်။ ဒါကပဲပြပွဲ၏နယ်ပယ်အတွင်းနှင့်ဒန်နီရဲ့ဇာတ်ကောင်နှင့်အတူအဓိပ္ပာယ်လုပ်မဟုတ်ဘူး။ စီးရီးကိုမြင်သူမည်သူမဆိုဒန်နီသည်ဖြစ်ပျက်သမျှအရာအားလုံးကိုအပြီးသတ်လိမ့်မည်မဟုတ်ကြောင်းသိသည်။
မင်ဒီစီမံကိန်းသည်ဇူလိုင် ၅ ရက်အထိ ၄ ကြိမ်မြောက် ၄ ကြိမ်မြောက်ရာသီတွင်ကျန်ရှိသည်။
တောင်ပိုင်းပန်းခြံရာသီ 23 မည်မျှဖြစ်စဉ်များ
The Mindy Project သည် Hulu တွင်ပဉ္စမရာသီသို့ပြန်လည်ရောက်ရှိသောအခါမည်သည့်အချိန်တွင်ပြန်လာမည်ကိုကျွန်ုပ်တို့သိပါလိမ့်မည်။
Mindy Project သည် Hulu မှအကောင်းဆုံးတီဗွီအစီအစဉ် ၅၀ တွင်ပါဝင်သည်။ streaming ၀ န်ဆောင်မှုကိုကြည့်ဖို့သင်စိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းတဲ့ပြပွဲများများရှိမရှိကြည့်ဖို့အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကိုကြည့်ပါ။
ကိုယ် Coraline ကြည့်ချင်တယ်
Netflix သို့မဟုတ် Hulu အပေါ်ဗိုက်ကင်း
netflix အပေါ်ရာသီ 10 သဘာဝလွန်
ဟာဝိုင်ယီကျွန်းကိုပြု၏ 5-0 Netflix ချွတ်ယူရ